Nkwukọrịta ahịa: Zere Lookinglele Dị ka Spammer!
Banyere mkparị kachasị njọ ị nwere ike ịnweta na thentanetị bụ ebubo na ị bụ onye spammer. Mwakpo ọ bụla na agwa gị enweghị ike ịnọ otu. Ozugbo mmadụ chere na ị bụ onye spammer, ị ga-afọ obere mgbe laghachi na ha mma n'akụkụ. Tozọ spamville bụ otu ụzọ naanị.
Nke kachasị njọ, ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mfe ịme usoro iji bụrụ onye na-eme ihe n'echeghị ya! Nke a bụ ụzọ ise kachasị elu (n'echiche m, n'ezie) enwere ike ibo gị ebubo ịbụ onye na-agha spam n'amaghị ama.
# 5 - Random akpata usekù
Laa azụ n'oge web ahụ, ọ dịka onye ọ bụla ga - ezigara gị ozi ịntanetị ọchị na akụkọ ifo ndị mepere emepe. Ga-agbazi ha site na weebụsaịtị dị ka Snopes ma ọ bụ rie ume ka ị na-ehichapụ ozi ha, mana na mkpokọta anyị niile maara na omume a bụ ezigbo iwe.
Ihe mere ozi ndị a jiri nwee nkụda mmụọ bụ na nke ahụ adịchaghị mkpa. You na-atụ anya ka ezinụlọ gị jiri email iji hazie njikọta na ndị ọrụ ibe gị iji kwurịta azụmahịa, ọ bụghị ibugharị mkpesa Internetntanetị kachasị ọhụrụ nke akwụ ụgwọ ọtụtụ afọ gara aga.
Obi dị m ụtọ na Networkjọ-Na-Work Network o yiri ka ọ kachasị na-aga n'ihu. Ma ugbu a, na-jupụtara na igbe mbata random kpatara akwụkwọ ịkpọ oku. A gwara anyị ka anyị chekwaa ụmụ nkịta, chekwaa gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ iguzo maka ikike otu ndị nwebigara ikike.
Ọzọkwa, ihe ndị a nile na-ada ụda, mana ha dị ka enweghị usoro. Ha wakporo ohere anyị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ihe kpatara ya, họrọ otu ma ọ bụ abụọ iji zigara ndị enyi gị. Ma ọ bụghị ya, ị ga-adị ka spam.
# 4 - Ihe nro nro
Oge maka ire ere 101. Nke a bụ nkọwa ngwa ngwa
Gosipụta nkwere site n'aka onye ahịa, ma ọ bụ onye nnata ozi, email, ma ọ bụ ozi ozigbo iji nye onye na-ere ahịa aka izipu ngwa ahịa, ozi, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na m nye gị ikike doro anya iziga m ozi, ị nwere ike ịme ya. Ma gịnị ma ọ bụrụ na anyị ezute na ọrụ ịkparịta ụka n'andntanet ma nye gị kaadị azụmahịa m? Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịkpọtụrụ m n'onwe gị, mana ọ pụtaghị na achọrọ m itinye gị na ndepụta ọ bụla.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na anyị nọ n'otu ndepụta azịza-All ndepụta, ịnweghị ikike m zaghachi-All banyere ụfọdụ isiokwu ọzọ karịa nke dị n'aka.
Cheta na ịpụpụ pụtara ihe Ma ọ bụghị ya, ị ga-adị ka spam.
# 3 - Mmegbu nke carbon
Ngwá agha kachasị dị egwu na ngwá agha dijitalụ gị bụ igbe CC. Ọ dịka igbe niile juputara na grenades: ị chọrọ ịkpachapụ anya maka iji naanị otu na ọ dịghị mgbe ọ bụla chọrọ iji ha niile n'otu oge.
Cheta Brody PR Fiasco? Nke a bụ iwu dị mfe:
Jiri naanị carbon-ma ọ bụrụ na ị bụ 100% ijide n'aka na 100% nke ndị nọ na ndepụta ahụ maara ibe ha nke ọma NA ga-enwe ekele maka ohere ịzaghachi-niile NA ga-enwe ekele maka azịza-Alls ozugbo.
Oge ọ bụla m nwetara ozi CC'd ebe m na-amaghị ndị mmadụ na CC akara, echere m: ị dị ka spammer.
# 2 - Nkọwapụ Nkwupụta
Nwetụla mgbe ị malitere ahịrịokwu na “Ewela iwe, mana…” ma ọ bụ “Ekwekwala na nke a bụ ihe ọjọọ?” Nwere ike ijide n’aka na ha na-ekwu okwu obi ọjọọ. Ma obu anyi kwesiri ikwu eziokwu ma obu debe echiche anyi. Ọ ga na-adị ka patronizing ikwu: "Ndo maka SPAM, ma…"
So – emela ya! Ọ bụrụ na ị kwere nkwa na ị naghị abụkarị spammer, ị dị ka spammer.
# 1 - Ozi nzuzo nke onwe
Nke a bụ ya: ụzọ kachasị njọ kachasị dị ka spammer. Ọ bụ mgbe ị na-ezigara mmadụ otu ozi nke ezubere maka ha naanị, mana ọ nwere ike dịrị onye ọ bụla mfe.
Ezigbo ihe atụ bụ ozi mgbasa ozi Twitter (DM) ma ọ bụ ozi ederede. Tụlee nke a:
Chei, ị nwere ike ịgwa ndị enyi gị maka weebụsaịtị ọhụrụ anyị? Ọ bụ na http://www.example.org. Daalụ!
Nke a nwere ike ịbụ ozi onye ọ bụla zere, zigara mmadụ naanị otu onye. Otú ọ dị, ọ na-agụ dị ka a ga-esi zigara ya nde! Ọ bụrụ na izipu ihe ederede na-egosi na ọ bụ ọnye ahịa site na ọwa nzuzo, ị ga-adị ka spammer. Tulee nke a:
Hey Robby, ị nyere anyị ezigbo nzaghachi mgbe anyị na-ewu saịtị ọhụrụ anyị. O ruola ugbu a, nweere onwe gị ịkekọrịta ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nke ahụ adịchaghị ka ọ bụ spam. Gbaa mbọ hụ na ozi gị akọwapụtara nke ọma, yabụ na ị naghị adị ka spammer!
Tags: kpariabrody proyiri carbonemail mmegbuemail disclaimerịpụ natupu iwepu ikikeozi nzuzospamozi ziri ozi twitterspam na-ezigara
Stats squared enwetawo mmalite izu ụka
Indy bụ StartUp Enyi na Enyi
Jun 22, 2012 na 8:05 AM
Nice ibuotikọ emi, dị ka ọ ga-kwuru na adịgboroja
dị nnọọ njọ ma na-ebibi ma ghara ichefu dam dam manụ. Ekwenyere m na ndị spammers dị elu na-eme
jiri sọftụwia, maka nsonaazụ dị elu, yana ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche
blogger biputere njikọ na-enweghị njikọ naanị ebe ọ bụla na-eme otu mmebi ahụ.
Ikwu eziokwu I think oge ya anyi nile kere uwa niile
ụkpụrụ omume nke ga-agwa spammer na-enweghị atụ, na e nwere
ụzọ ọzọ nke ị nwere ike biputere njikọ na blọọgụ gị.
Mana ọ gụnyere ime ya n'ụzọ ziri ezi, usoro ụkpụrụ na
ụzọ kachasị mma, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịgbasa okwu maka ụkpụrụ ọma pụrụ iche nke rụpụtara ọrụ,
ma ọ ga-aga ogologo oge n'ibelata ọtụtụ spam anyị na-enweta n'ezie,
ọma ebe a na-enwe olileanya.